Wednesday December 12, 2018 - 14:24:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay Max'med Mursal oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ka jawaabay eedeymo maalmihii lasoo dhaafay uga imaanayay guddoomiye ku xigeennadiisa iyo xildhibaanno taageersan madaxtooyada.
Mursal oo ay la socdaan tobanaan xildhibaan ayaa maanta isaga guuray xaruntii uu ka deganaa Villa Somalia wuxuuna degay Hotel Shabelle oo ku dhow xarunta hay'adda UNDP oo ammaankeeda si aad ah loo adkeeyo.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in guuritaanka Mursal ay timid kadib markii Kheyre iyo Farmaajo ay saareen cadaadis siyaasadeed ayna xayiraad kusoo rogeen dhaq dhaqaaqyadiisi siyaasadeed.
Xildhibaannada kala ah Cabdi Raxmaan Odawaa iyo Mahad Saladaa ayaa xaqiijiyay in Max'med Mursal uu xuriyaddiisa dib uhelay islamarkaana 72 saac gudahood uu ka baxay go'doomintii.
Dhinaca kale Mursal ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku sheegay in mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha uu yahay mid sax ah islamarkaana dhowaan cod lagelin doono, wuxuu soo daliishay qodobo ku qoran dastuur gaaleedka udegsan dowladda Federaalka.